दैनिक २५ सय जना उपत्यका भित्रिन्छन् - समाचार - कान्तिपुर समाचार
दैनिक २५ सय जना उपत्यका भित्रिन्छन्
चालक र सहयोगीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रणाली नहुँदा संक्रमणको जोखिम कायमै
जेष्ठ ९, २०७७ जनकराज सापकोटा
काठमाडौँ — काठमाडौं भित्रिने मालबाहक सवारीका चालक र सहयोगीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्थित प्रणाली नहुँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम कायम रहेको छ ।
ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार अहिले पनि दैनिक ३ हजारको हाराहारीमा चालक र सहचालक उपत्यकामा भित्रिइरहेका छन् । संक्रमण बढ्दै जाँदा सरकारले काठमाडौं उपत्यका छिर्न कडाइ गरे पनि संक्रमित जिल्लाबाट आउने मालबाहक सवारीका चालक र सहयोगीहरुको व्यवस्थित स्वास्थ्य परीक्षणको प्रबन्ध गरिएको छैन ।
६ गतेयता तीन दिनमा मात्रै ४ हजार २ सय ८१ ट्रक, टिपर र लाइट गाडी काठमाडौं भित्रिएएका छन् । सबै गाडीमा ७ हजार ६९ जना काठमाडौं प्रवेश गरेका छन् । पछिल्लो तीन दिनमा ३ वटा बस भक्तपुरको जगाती नाका हुँदै काठमाडौं भित्रिए, जसमा ४९ जना यात्रु थिए ।
बिहीबार बिहान ६ बजेदेखि शुक्रबार बिहान ६ बजेसम्मको २४ घन्टामा १४ सय ६ वटा ट्रक र टिपर भित्रिएका छन् । जबकि यही समयमा ३ सय ५१ हलुका सवारीसाधान र एउटा बस भित्रिएको छ । ट्रक/टिपरमा २४ सय ४७ जना, हलुका सवारीबाट ६ सय ९४ जना र बसबाट १३ जना उपत्यका भित्रिएका छन् ।
संक्रमणको जोखिम धेरै भएको प्रदेश २ र वाग्मती प्रदेशबाट उपत्यका भित्रिने सवारीहरुको संख्यामात्रै ५ सय ५९ रहेको छ । संक्रमणको जोखिम भएका जिल्ला हुँदै सवारीसाधन काठमाडौं भित्रिँदा चालक र सहयोगीबाट संक्रमण फैलिने जोखिम देखिन्छ ।
ट्रक, टिपर र लाइट गाडी बस जम्मा सवार
८ गते बिहान ६ बजेबाट ९ गते बिहान ६ बजेसम्म
१७५७ १ २७५४
७ गते बिहान ६ बजेबाट र ८ गते बिहान ६ बजेसम्म १३५६ ०
६ गते बिहान ६ बजेबाट
७ गते बिहान ६ बजेसम्म
११६८ २ २००९
प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ १७:४६
सर्वेन्द्र खनालको बयान- सांसद यादव बालुवाटार जाने भनेरै आएका हुन्
वैशाख ११, २०७७ जनकराज सापकोटा
काठमाडौँ — समाजवादी पार्टीका नेता एवं पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादव अपहरणमा परेको भन्दै बुधबार सोही पार्टीका प्रचार विभाग उपप्रमुख विश्वदीप पाण्डेले फेसबुक स्टाटस लेखे । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै योजना अनुरुप राज्यमन्त्री यादवको अपरहण गरिएको आरोप लगाए ।
बुधबार जनकपुरबाट ल्याइएका यादवलाई लिन काठमाडौंबाट नेकपाका सांसदद्वय महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल काठमाडौंबाट गएका थिए । उनीहरुले साथमा लिएर नभइ अपहरण गरेर नै ल्याएको भन्ने सूचना बाहिरियो ।
कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा पूर्व आईजीपी खनालले आफू जनकपुर गएको स्वीकारे । उनले बुधबारयताको घटनाक्रम यसरी बताए:
मंगलबार घर फर्किन नपाएर अलपत्र परेका मान्छेलाई कसरी उद्धार गर्ने भनेर म भक्तपुरमा सांसद महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठसँग गफ गरिरहेको थिएँ । अलपत्र परेकालाई नि:शुल्क खाना खुवाउने कुरा पनि भइरहेको थियो ।
त्यहीबेला जनकपुर जाने र सांसद सुरेन्द्र यादवसँग कुरा गर्ने भन्ने कुरा आयो । म जनकपुरमा एसपी भएर रहँदा नै मेरो चिनजान सांसद उमाशंकर अरगरियासँग थियो । उनको सांसद महेशजीसँग पनि कुराकानी भइरहेको रहेछ । त्यही बेला मसँग पनि कुरा भयो । उहाँले नै मसँग सुरेन्द्रलाई काठमाडौं ल्याउनुपर्ने, लकडाउन भयो भन्ने कुरा गर्नुभयो । अरगरियाले भनेपछि मैले पनि सासंद सुरेन्द्रसँग कुरा गरें । उनले आफू लकडाउनमा परेको र काठमाडौं आउनुपर्ने भएको कुरा सुनाए । उनी र महेशबीच पनि कुरा भयो ।
महेशहरुले सांसद सुरेन्द्रसँग भएको कुराबारे बालुवाटारमा पनि जानकारी गराए । 'ऊ आउने खालको छ भने एप्रोच गर्दा हुन्छ' भन्ने खालको कुरा आयो । यो बिषयमा कसले डिल गरिरहेको छ भन्ने थाहा भएन । तर मसँग कुरा गर्दा भने सुरेन्द्रले राम्रै कुरा गरे ।
महेश र किसानले पनि जनकपुर जाने र कुरा गर्ने भनेपछि हामी मंगलबार त्यस्तै ४ बजेतिर हिँड्यौं । जाम पनि खोलखाल गरेर हामी बीपी हाइवे हुँंदै बर्दिवास पुग्दा रात परिसकेको थियो । हामी त्यहींको गौतम होटलमा बस्यौं । म खासमा त्यता जाने भन्ने नै थिएन । बाहिर जाँदा चाहिने कपडा पनि मैले बोकेको थिइनँ । लगाएकै कपडामा रात काटें ।
हिजो (बुधबार) बिहान करिब नौ बजेतिर हामी यादवको घर पुग्यौं । त्यहाँ के-के राजनीतिक गफ पनि भयो । हामीले खाजा खायौं । मज्जाले भात पनि खायौं । अनि तीन बजेतिर हामी फर्कियौं । हामी आफ्नै गाडीमा थियौं । जाने विषयमा उनले कुरा गरे । राजनीतिक तहमा पनि कुरा भयो । उनको ईच्छा भने यता उपेन्द्र यादवसँग पनि कुरा मिलेन त्यही भएर भन्ने खालको थियो । उनको कुरा दोधारेखालको देखिन्थ्यो । पछि आश्वासन मिलेपछि उनी तयार भए क्यार । भित्रको गोप्य कुरा भने मलाई थाहा भएन ।
त्यहाँका अर्का डाक्टर सूर्यनारायणसँग पनि उनले कुरा गरे । अरगरियासँग पनि उनले बारम्बार कुरा गरे । सुरेन्द्रका भिनाजु पनि त्यहीं थिए । बालुवाटार छिर्ने भन्ने कुरामा सहमत भए ।
करिब ४ बजेतिर सुरेन्द्र, कौशल भन्ने प्रदेश सांसद, पिएसओ, भिनाजु गरेर दुईवटा गाडीमा उनीहरु हिँडे । हामी अर्को गाडीमा भयौं । राति धुलीखेलमा आएर खाना खायौं । काभ्रेतिर पुग्दा नै यता जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी मिलेको भन्ने कुरा सुनियो । सांसद अपहरण भयो भनेर सामाजिक संजालमा लेखियो भन्ने कुरा पनि मैले बाटोमै सुनेको थिएँ । सांसद यादव त्यो कुरा सुनेपछि निकै रिसाए । उनले त्यसबारे घरमा पनि कुरा गरेका थिए ।
राति काठमाडौं छिर्दा साढे दुई हो कि तीन बजिसकेको थियो । महेश र किसानसहित उनीहरु मेरियट होटलमा छिरे । म बालुवाटार छिर्छु भनेर आएका सुरेन्द्रले पछि त्यस्तो गर्छन् भन्ने नै भएन नि ! उनी त आफै खुशीसाथ आएका थिए । उनीहरुको आफ्नो किसिमको कुरा थियो होला । उनले त प्रधानमन्त्रीसँग आज बिहान बालुवाटार आउँछु भनेर भनेका थिए । तर, राति नै दुई पार्टी एकीकरण भएपछि सायद उनले आफूलाई अनसेफ ठानेर बाबुरामकहाँ पुगेका होलान् ।
म नागरिक हुं । यस्ता कुराले मलाई किन विवादमा तान्ने । मैले जबर्जस्ती गरेको पनि होइन । मलाई भेट्दा त सुरेन्द्र खुशी नै भएका थिए । यो कुरा विस्तारै आउँला नि त !
प्रकाशित : वैशाख ११, २०७७ १७:०१